Kedu ihe kacha mma maka igwe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Okpokoro okpokoro okpokoro - mkpebi ndị dị irè
Kedu ihe kacha mma maka igwe?
Aluminom. Ẹkenam ka aihe maka okpokoro agbaihe dị ka afọ 30 gara aga, aluminom bụ nke kachasịkarịihe onwunwe. Ọ dị ntakịrị karịa nchara, n’ihi ya, ọ na-ebute ọkụosisi. N'ihi njupụta ya na-ebelata, ọ na-achọ ka nnukwu tube diameters buru ibu iji nweta ike zuru ezu maka aetiti igwe kwụ otu ebe.
Njem, nha ụkwụ, ụdị igwe kwụ otu ebe na nkọwapụta akụrụngwa. Yingzụta igwe eletrọniki bụ azụmahịa dị mgbagwoju anya tupu ị banye ọbụna n'ime ihe etiti. Na mkpokọta, ọ bụ ọgụ dị nfe dị n'etiti carbon na aluminom, mana ọ bụghị nke ahụ dị mfe Taa, anyị ga-eleba anya na azụmaahịa ihe a niile (egwu dị egwu) (egwu dị egwu) Na mgbe gara aga, kịọkụ carbon nwere uru karịa aluminum wiil, karịsịa mgbe jikọtara na a ire ụtọ imecha agbanweela nnọọ a bit na-adịbeghị anya.
E nwere ụfọdụ ọmarịcha ịnyịnya ígwè na-achọ mma igwe kwụ otu ebe, n'eziokwu, maka ụfọdụ ụdị ọ na-esiri ike ịkọ ọdịiche dị n'etiti silhouette nke igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe. Echere m, lelee anyịnya igwe abụọ a si Pụrụ Iche, Levo na carbon na Levo na aluminom. Ma ọ bụ ma eleghị anya, Mondraker aghụghọ na carbon ma ọ bụ aluminom.
O siri ike ịhọrọ. O doro anya na e nwere ụfọdụ ụdị ndị na - anaghị ahọrọ iwu ụgbọ ịnyịnya ígwè ha na carb. Ya mere echere m na azịza nye ajụjụ ndị ahụ bụ nke gị na nke ahụ, ọdịdị ahụ na-amasị gị ma ọ bụ? Ọ bụ otu n'ime isi ihe na-eme mkpebi ndị mmadụ. (egwu dị nro) eMTB? Ọfọn, ikekwe ọ bụghị, gram dị mkpa ugbu a na igwe kwụ otu ebe ugwu, ọkachasị na ọzụzụ dị ka obe-obodo ma ọ bụ enduro, mana ị ga-akwụ ụgwọ maka ya, ọkachasị na ndenye akụrụngwa.
Na mkpokọta, carbon dị mfe karịa alloys maka otu ike ahụ, mana ọ bụ azụmahịa dị mgbagwoju anya. Ihe banyere e-anyịnya igwe bụ na ibu ọdịiche dị n'etiti dị iche iche anyịnya igwe nke dị iche iche ụdị bụ n'ezie nnọọ nnukwu, otú etiti ihe onwunwe nwere obere mmetụta karịa ihe dị ka moto ụdị na batrị ikike. Dịka ọmụmaatụ, batrị elekere 500 watt dị ọkụ karịa batrị elekere 700 watt, mana ọ bụrụ na ị na-achọ elele arụmọrụ ọ ga-abụrịrị nke ikpeazụ.
Carbon ọ dị ike karịa alloy ma ọ bụ ve rsa? Nke a siri ike, ọ dabere n'ezie na ndị mmadụ na-azụ ahịa ahụ dum, dabere na ndị na-emepụta ya, dabere na ihe eji eme yana ọtụtụ ihe ọ dabere na usoro nrụpụta ọ bụla. Eleghi anya ajụjụ ka ukwuu ma ọ bụ ajụjụ dị iche maka unu, gịnị bụ ebumnuche nke igwe elektrọnik gị? Na mkpokọta, carbon na-achọ ịgbawa n'okpuru mmetụta, ebe alloys na-agbanwekarị, mana azụmahịa niile dị na nhazi nke igwe igwe igwe igwe gị. (Ọyụ Music) nke na-ewetara anyị isi na-esote na isi okwu dị ezigbo mkpa, kedụ ka okpokoro ahụ si adị mgbe ị na-anya ụgbọ ala? Na-enweghị mgbaghara, okpokolo agba na osisi nwere ike ịbụ ezigbo iru ala na-agba ịnyịnya, na na ndị ọzọ kilomita anyị ekpuchi anyị e-anyịnya igwe, nkasi obi dị ezigbo mkpa.
Yabụ kedu ihe ga-adaba adaba? Ugbu a ọ bụghị ihe nzuzo, ọ maara nke ọma na ụfọdụ ụdị na-ewere nkwesi ike nke igwe kwụ otu ebe dị ka ihe niile, agakwara m na p resscamps na-enweghị ngwụcha ebe onye njikwa azụmaahịa nyere ngosi wee sị, 'Igwe kwụ otu ebe a bụ ọtụtụ oge siri ike karịa afọ gara aga. ”Ma e nwere ọtụtụ ndị odeakụkọ n’ebe ahụ na-asị,“ Ehee! Onye ọ bụla emeela ya. Dịkwa ka ịnweta nkwesi ike na ikike kwesịrị ekwesị? Kedu ihe na-agbanwe agbanwe, kedu ihe siri ike? Nke ahụ dabere na ahụmịhe na ọtụtụ n'ime ya.
Ugbu a, anyị ga - egosipụta ọdịiche dị n’etiti Die Flex - Ikwado oke na-adị mfe n’ezie. Ọfọn, ndị a bụ abụọ carbon dị iche iche si Specialized. Ya mere, mgbe ị na-ele ihe a anya ebe a, ọ na-agbadata ya n'ụzọ dị mfe na ntụziaka ahụ, ebe ị na-eme ule ntụgharị na ya, ọ na-esiri nnọọ ike ighikota.
viagra na mmega ahụ
Ihe a, n'aka nke ọzọ, dị ezigbo mma na ntụziaka a ebe ọ bụ n'ezie na ọ na-agbanwe agbanwe na ntụziaka a. (egwu na-ada ụda) Ugbu a, ọ bụrụ na anyị elelee ego a na-etinye na ihe dị iche iche n'ozuzu ha? , Carbon bụ ọkụ ha dị oke ọnụ karịa igwe kwụ otu ebe nke aluminom mana mgbe ahụ lee ụdị dị iche iche, m na-ekwu na ụfọdụ ụdị anaghị eme igwe igwe ikuku ebe ụfọdụ ụdị anaghị eme igwe igwe. Ihe si na njedebe bụ carbon, ee, na mkpokọta, ọ dị ntakịrị ọnụ.
Nke a bụ aghụghọ aghụghọ. Ugbu a, anyị niile na-anụ akụkọ ụjọ ndị ahụ nke ọkpọkọ isi na-atọghe ma ọ bụ na-agbada brackets cracking. Ihe nzuzo dị ebe a bụ ime akara ụlọ gị na ika ahụ, lelee ọgbakọ ndị ahụ wee hụ ma ọ bụrụ na ụdị akara nwere ezigbo ahụmịhe na amamịghe banyere imepụta carbon.
Ah, nke ahụ bụ ihe aghụghọ, ọ bụghị ya? Dum ihe Isiokwu nke Ekliziastis na anwụ ngwa ngwa. Ọfọn n'ozuzu, dịka m kwuru na mbụ, carbon na-agbawa na mmetụta, ebe alloys na-ehulata ma ọ bụ deform, nke, n'ụzọ, nọ n'okpuru mmetụta dị oke njọ. Mana ma eleghị anya ajụjụ ahụ dịịrị gị, onye ọkwọ ụgbọ ala, ị bụ onye ọkwọ ụgbọ ala dị arọ nke na-anya ala nke aghụghọ, nke nwere nsogbu, okwute okwute? Nwere ike ịbụ ụdị onye na-agba ịnyịnya nke kwesịrị ịgba ịnyịnya alloy, mana nke ahụ bụ naanị nzọ ị maghị ma ọ bụrụ na ị ga-ada, yabụ ị ga-enyocha akwụkwọ ikike ndị na-emepụta igwe kwụ otu ebe na-enye gị n'igwe igwe kwụ otu ebe. ma ọ bụ ma eleghị anya, lelee etiti nchebe na igwe kwụ otu ebe, n'ihi na ọ nwere ike tinye ọtụtụ nkwụsi ike na etiti gị eMTBs.
Cheta, enwekwara igwe nchara ma a ga-enwe nke ahụ na ọ bụghị n'ọdịnihu dị anya. Isiokwu a nwere ike bụrụ ihe niile gbasara itinye aka gị na nkwupụta ahụ, yabụ azụmahịa dị mgbagwoju anya wee sonyere mkparịta ụka ndị dị n'okpuru ebe a. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele eMTB carbon, na Levo, ma ọ bụ wiilị alloy, enwere Canyon Spectral dị ala ebe a.
Echefula ịpị ụwa iji denye aha na EMB. Nye anyị mkpịsị aka aka ma ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị.
Kedu ihe eji eme okpokoro igwe?
Ọmaosisiwuru site na myriad ofihe. Agbanyeghi na otutu aho enwere otutu ndi di ka ngwo na plastikosisi, ụzọ dị ugbu aanyịnya igweejiri otu ma ọ bụ ngwakọta nke anọ ndị aihe: ígwè, aluminom, titanium na eriri carbon.
pedal ike mita
Anyị ekpuchiwo ọtụtụ, ọtụtụ akụkụ dị iche iche nke ijigide igwe kwụ otu ebe gị na GCN, mana ị chetụla echiche maka iwulite otu? Ugbu a, m na-adịghị nnọọ pụtara na-etinye ya ọnụ si niile dị iche iche iberibe. Echere m na ị na-agbanye ma ọ bụ na-agbakọta igwe kwụ otu ebe gị, nke a bụ Bicycle Academy na Frome, UK ma ọ dị iji nyere ndị mmadụ aka ime nke a. Site n'enyemaka ha, anyị ga-eduzi gị na usoro ahụ.
Olee otú iwu a igwe kwụ otu ebe. Andrew Denham, m n’azụ, bụ onye guzobere Bicycle Academy na ọ ga-abụ onye nkuzi anyị taa. Andrew, adị m njikere ịgbado ọkụ n'ihe nke abụọ. Huh. (ngwa ngwa egwu) - Tom, amaara m nke ọma na ị na-elele websaịtị nke ndị na-arụ ọrụ igwe kwụ otu ebe ma na-ahụ tebụl geometry na ịmara ma igwe kwụ otu ebe ga-adabara m ma ọ bụ otu mpempe akwụkwọ ma ọ bụ mpempe akwụkwọ na-acha ọcha ma na-amalite site na ọkọ na-eme m a bit ne ajọ iwe n'ezie.
Yabụ kedu ka isi eme ya? Kedu ka esi enweta geometry ziri ezi? - O doro anya, ya mere ọ bụ akụkụ aghụghọ mara mma nke usoro ahụ. Ihe mbụ anyị ga-atụle bụ ọnọdụ nke onye ọkwọ ụgbọ ala. - Ọ dị mma - anyị kwesịrị ijide n’aka na ahụ gị nọ n’ọnọdụ kwesịrị gị ka ị jiri igwe kwụ otu ebe nke ọma ma nke ahụ dabere obere n ’ụdị igwe kwụ otu ebe ọ bụ.
Ya mere, mgbe anyị ruru na ike ike udi nke ịkpọtụrụ gị na. chee igwe kwụ otu ebe, yabụ na anyị nwere mgbodo mgbado ụkwụ nke ejiri cranks ahụ, sadulu, - ee. - azuokokoosisi nwere ụfọdụ aka ịnyịnya ibu na ebe anyị nwere ike itinye aka iji kwado onye na-agba ya kamakwa ụdị igwe kwụ otu ebe ọ bụ isi akụkụ - ee, ruo ugbu a, amaara nke ọma.
Amaara m nọmba ndị a niile ma enwere m obi ike, mana olee otu anyị nwere ike isi tinye obere ntakịrị n'ime ntakịrị ntakịrị ma mara na igwe kwụ otu ebe ga-agba ịnyịnya na njedebe nke ụbọchị? ? - Enweghị azịza ọsọ ọsọ na nke ahụ, yabụ ọ na-ewe ọtụtụ iterations. Thingsfọdụ ihe anyị ga-achọ ịtụle na mbụ. Ya mere chee echiche banyere otu ị chọrọ ka igwe kwụ otu ebe siri kpaa agwa n'okporo ụzọ, ọkachasị etu ọ si emetụta ihe ntinye ndị na-agba ịnyịnya.
Anyị kwesịrị iche echiche banyere akụkụ kachasị mkpa, ndị a bụ oche ụkwụ na ụzọ igwe, nke na-akọwa ụdị nkwụsi ike na-aga n'ihu yana nkwụsi ike nkuku. - Ọ dị mma, yabụ anyị nwere isi okwu anyị ebe a. Obi ka na-echu m ụra, Tom, kedu ka m ga - esi weta ya niile wee mepụta ya - O doro anya, yabụ mgbe anyị mechara ihe niile ma nwee ọ areụ na ọnọdụ ọkwọ ụgbọ ala, ka anyị lelee usoro CAD, na ebe anyị na-emepụta geometry, ma mesịa gaa na nhazi nke etiti ahụ ma kpoo ụfọdụ iberibe ígwè ọnụ - Ọ dị mma - Ọ dị mma ozugbo anyị nwere ozi dabara adaba site na nnọkọ dabara adaba anyị mere anyị nwere ike itinye ya n'ime ụdị ahụ. na-edozi ọnọdụ nke onye na-agba wee nye anyị nnwere onwe, mepụta jiometrị nke igwe kwụ otu ebe maka ihe pụrụ iche ka anyị wee nwee ike ịhazigharị mkpịsị ụkwụ, anyị nwere ike ịme nke ahụ wee mezie ogologo usoro ahụ, dịka ọmụmaatụ - ịmara ihe nọmba ndị a kwesịrị , bụ ọrụ a ma ọ bụ, ị maara, nwere ike? You na-edegharị ha site na igwe kwụ otu ebe? - Y’oburu na ibido n’enweghi onodu uche, iburu igwe eji agba ugbua bu uzo zuru oke.
Ọ bụrụ n’ịnwere ike ịgba ịnyịnya ígwè n’oge gara aga na ị masịrị ụzọ ọ dị, ị nwere ike ịba n’ime, ọ bụrụhaala na ị lele nha anya kwesiri ị nwekwara ike ileba anya na wiil na ụfọdụ akụkụ ndị ọzọ wee nweta otu Nwee mmetụta maka ihe igwe kwụ otu ebe a bụ na ọ bụ ebe mmalite mara mma, ee. (ngwa ngwa egwu egwu) - Nzọụkwụ abụọ nke usoro a ma anyị nọ ugbu a na nhọrọ nke ọkpọkọ maka etiti anyị. Ugbu a, anyị nwere obi ike na eserese CAD nwere akụkụ ziri ezi, ọbụlagodi na ọnọdụ olu karama ahụ, iji hụ na anyị nwere ike ịnweta karama abụọ na etiti anyị.
agbajikwa oge mgbake
Ma ugbu a, anyị nwere nnukwu nhọrọ nke hoses dị iche iche. Anyị ga-ahọrọ ndị ziri ezi? - Ya mere enwere ndi di iche iche di iche iche. Anyị na-arụ ọrụ na ígwè ma anyị ga-eji ọkpọkọ si Columbus, ụlọ ọrụ Italiantali.
Ha na-enyekwa narị otu narị na narị otu narị nke nhọrọ ọkpọkọ dị iche iche, ma na njikọta nke alloys dị iche iche, yabụ n'ezie ụdị nsụgharị dị iche iche nke nchara - ọ dị mma - na kwa ogologo dị iche iche, dayameta dị iche iche, mgbidi dị iche iche na ihe ndị yiri ya. Yabụ, na mgbakwunye na nke ezigbo igwe gị, anyị kwesịrị ịtụle nrụgide ọ ga-agabiga, otu ị dịruru arọ, ike ị na-agba ma yana ike dị elu ma ọ bụ dị ala na-ewepụta yana ọ masịrị gị. ịgbanye, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụ chọọ ịkwapu n'elu ịnyịnya ahụ ma ọ bụ pụọ na sadulu ahụ, nke ọ bụla masịrị gị.- Ọ dị mma n'ihi na ọ bụ nghọtahie a na-ahụkarị, ọ bụghị ya, na ị ga-enweta usoro tubing, sịnụ, Columbus XCR , nke na-mere nke igwe anaghị agba nchara, na ọ ga-enye gị ụfọdụ ịnyịnya àgwà ma ọ bụrụ n'ezie na i nwere ike ịgbanwe dayameta eter nke akpa na ọdịdị nke akpa na ọbụna ogologo nke akpa na nke ahụ ga-abụ ihe na-agba ịnyịnya na-eche nke igwe kwụ otu ebe. - Kpamkpam, ee.
Ngwakọta dị iche iche nwere ihe dị iche iche, na-enye onye mmebe ma ọ bụ onye nwe ụlọ ọtụtụ nhọrọ n'ihe gbasara mgbidi mgbidi, profaịlụ butted, ọdịdị nke tubes na ihe ndị yiri ya. Na ijikọta bụ n'ezie usoro a na-ahụkarị nke ijikọta alloys dị iche iche iji nweta ihe dị iche iche n'akụkụ dị iche iche nke etiti - Columbus, na weebụsaịtị ha, ha na-erere gị oche oche na ọnụnọ agbụ na isi ọkpọ. - Ọ bụ ndụdụ ndụdụ.
Anyị nwere usoro ụzọ abụọ ebe a, yabụ. - Echere m na nke a bụ BMX yinye.- Ọ ga-adị mma nke ukwuu dị ka ihe mgbanaka.- Ee, lee ị ga-aga. Anyị enwere ike igwu obere egwuregwu? Nwere ike ịgwa m kpọmkwem ihe ọkpọ ọ bụla bụ mgbe ị tụgharịrị wee họrọ otu n'ime enweghị ebe? - M nwere ike na-agbalị. (Ha na-achị ọchị) - Ọ dị mma, mechie anya gị maka nkeji.
Chere obere oge. Ekwesịrị m ịchọta otu. Nke ahụ nwere ike ịdị mfe, ka anyị hụ.
bụ melatonin Mmeju irè
Kedu ihe bụ nke ahụ? - Nke ahụ bụ steerer tube, ya mere, otu inch anụ steerer tube. - Otu-anụ ọhịa steerer tube! Nwoke di ndu. Kedu ihe ị nwere nke ahụ? Ma nke ahụ bụ ya.
Ugboro igwe kwụ otu ebe? - Nke ahụ ziri ezi Ya mere, nke ahụ bụ ihe nkedo na ihe gbagọrọ agbagọ maka ọtụtụ nkwụsị taya. - Dị jụụ. Yabụ, ndụdụ ndụdụ? - Chainstay, ee. - Chainstay, ee, enwere m nke ahụ.
Enweghi m down tube ugbu a. - Bịanụ, lee ọkpọkọ ala - Whoa! Lelee nke a. Ka anyị gawa.
Anyị nwere tubes anyị. - Ka anyị wuru igwe kwụ otu ebe. - Ka anyị wuru igwe kwụ otu ebe.
Nri, anyị nwere ọkpọkọ anyị. Tom, oge eruola ka ọ dị weld? - Ọbụbeghị. Anyị ka nwere usoro ole na ole anyị ga-aga, yabụ anyị ga-ebipụ ha, kpụzie ha, yabụ belata ha ọnụ.
Jikọọ ha ọnụ ka anyị wee nwee ike ịpụ ya site na jig ahụ, mee braising niile, wee kwadebe, agba. - Ọ dị mma. Ọfọn, ọbụlagodi usoro otu na abụọ nke usoro a emeela ugbu a.
Anyị nwere geometry anyị, anyị nwere akụkụ ọrụ anyị ma anyị nwere tubing anyị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ usoro ndị a, (NA-AB SOỌ) mgbe ahụ, ha ga-anọ n'isiokwu abụọ na-esote n'usoro a ma ị nwere ike ịbịakwute ha naanị na ịpị ebe ahụ na n'okpuru n'okpuru. Ugbu a, anyị chọrọ ezumike tii achọrọ nke ukwuu, mana ka anyị nọ na nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịdenye aha na GCN. Iji mee nke a, dị nnọọ pịa ụwa.
ime obodo ịgba ígwè
Kedụ ka i si ewere ya? Mmiri ara ehi, sugar? - Mmiri ara. - Jụụ, bye.
Kedu ihe eji eme okpokoro agba ugwu?
Ugwu igwe kwụ otu ebe101
Taaokpokolo agbaeji akwa igwe na ihe mejuputara ya. Kacha nkịtịihegụnyere eriri carbon, aluminom, nchara na titanium. Onye ọ bụlaihe onwunwenwere uru ya na ahia ya-eme kaọ dabara maka ịnya ịnyịnya gị, mmefu ego ma ọ bụ ebumnuche gị.
Gịnị Aluminom eji maka igwe kwụ otu ebe?
Enwere isi abuoaluminomalloys na iji naigwe kwụ otu ebeụlọ ọrụ taa - 6061 na 7005.Jun 21, 2020
Okpokoro agba ịnyịnya ígwè aluminom ọ dị ike?
N'ihi naaluminomọ bụghị dị kasie ikedị ka nchara, a ga-eji ihe ndị ọzọ mee iheetiti siri ikenainogideezu. Yabụ,aluminomnwere nkenke ike-ibu-ibu karia ígwè. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụaluminom igwe kwụ otu ebetubes tụọ ihe karịrị 1.5 ”na dayameta.Ọnwa Ise 18, 2021
Okpokoro ígwè ígwè dị mma karịa aluminom?
Ike. Mgbe ọ bịara n'ike,ígwè-ekpebirianyịnya igwebụ ndị a na-apụghị ịgbagha agbagha mmeri.Ncharabụ budataikema na-adịgide adịgidekarịayaaluminomonye ozo, na-eme ya oke nhọrọ maka ugwuanyịnya igwe.Nchara-ekpebirianyịnya igwena-enwe ike ịmịkọrọ ụfụ na nhụjuanya na-ata ahụhụ.Machị 9, 2016
Okpokoro agba ịnyịnya ígwè Aluminium ọ dị mma?
Ndabere makaaluminombụ na ọ nwere ike ịmịpụta ịgba ọsọ siri ike - ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya nwere ekele maka nke a. Ọ bụ ezie na ọ dị mfe nkụ, o yighị ka ọ ga-ada kpamkpam - na-eme ka ọ bụrụezinhọrọ makaokporo ụzọna ndị na-agba ọsọ ndụ.Ezigbo aluminomnwere ike ịdịru ndụ - mana ọ ga-emeghe ike ọgwụgwụ na nrụrụ.Ọnwa iri 18, 2017
Kedu ihe kpatara eji eme igwe igwe eji arụ aluminom?
Aluminomokporo ụzọanyịnya igwe
Aluminombụru onye achịjeru Nchileke ẹjaekuihe onwunwe tupu carbon enwee ike inweta. Ọ bụ ihe dị mfe ma sie ike ma na-adịkarị ọnụ ala karịa imepụta carbon. Iji mezuo ike ka ukwuu ibu ruru, ogoaluminom igwe kwụ otu ebena-egbu.Ọnwa iri 18, 2017
Ogologo oge ole ka igwe kwụ otu ebe nke Aluminom na-adịru?
Aluminom okpokoronweta ndụ kachasị ike gwụrụ nke ihe ọ bụla eji rụpụtaokpokoro igwe. Ahụkarịaluminom etitinwere afọ ndụ ise ruo afọ iri.
Ngwongwo aluminom nke aluminium kariri igwe?
Ọ bụ ihe dị mfe ma sie ike ma na-adịkarị ọnụ ala karịa imepụtakarịacarbon. Mgbe ọ bịaraokpokolo agba,aluminom'ejikọtara' ya na onye ọzọígwè. Iji mezuo aka ukwuuike ibu ibu, ogoaluminom igwe kwụ otu ebena-egbu. IheỌzọna-akụ, ndịmma.Ọnwa iri 18, 2017